China Spandex Jacquard Knitted High Stretch Elasticity Breathable Fabric For Yoga Cloth Manufacturer and Supplier | Ndị na-azụ ahịa igwe Wenchang
Spandex Jacquard Knitted High Stretch Elasticity Breathable Fabric N'ihi Yoga Cloth
Ihe Nke ： kwc21-4081
Ihe ： 88% Polyester 12% Spandex
E ji mara ： antibacterial ， elu ekwedo ， High Agba Fast ， igba ajirija ， mmiri Absorption ， ngwa ngwa kpọrọ nkụ ， Nkasi obi
Maka Yoga, Mgbatị, Ahụike, Typedị Ọrụ Ọ bụla, Ma ọ bụ Jiri Kwa ụbọchị. Yoga efe ara Ikpokọta Fashion, Ọrụ Na Performance
Ngwaahịa ngwaahịa Yoga eyi ákwà
Nkebi NO KWC21-4081
Ihe onwunwe 88% Polyester 12% Spandex
Ibu ibu 250GSM
Njirimara Na-eku ume / Elasticity / High Quality
Akwa agba agba
Jiri Swimwear / Uwe / Egwuregwu
Akwụkwọ RSG / SGS
Nke mbu, biko ghota ihe atumatu ato a: uzo larịị, akwa Twill na satin.
Nkịtị dị ọcha: A na-akpọ akwa a kpara nke ọma na akwa larịị. Nke ahụ bụ, yarn ahụ a na-agba n'ahịrị na akwa ahịhịa ahịhịa ahụ na-agbadata eriri ọ bụla ọzọ (ya bụ, yarn ahụ dị 1 na 1 ala). Characterizeddị akwa a bụ ọtụtụ ihe dị iche iche na-arụkọ ọrụ ọnụ, ụdị siri ike, ịcha ọkọ, na ebe dị larịị. Uwe mkpuchi akwa dị elu na-adịkarị akwa ákwà.
Ugboro abụọ: A na-ejikọta yarn na akwa yarn ma ọ dịkarịa ala yarn abụọ, ya bụ, 2 elu na 1 ala ma ọ bụ 3 elu na 1 ala. Na-agbakwụnye isi ogologo na isi nke ihe na-agbanwe agbanwe iji gbanwee usoro nke akwa ahụ, nke a na-akpọkarị twill fabric. Ihe e ji mara ụdị akwa a bụ na ọ dị oke oke ma nwee mmetụta siri ike nke usoro akụkụ atọ. Ọ bụ alaka 30, alaka 40, na alaka 60.
Satin akwa: akwa na weft na-ejikọta ya otu ugboro ma ọ dịkarịa ala yarn atọ, ya mere akwa satin ahụ na-eme ka akwa ahụ jupụta, ya mere akwa ahụ buru ibu. Satin kpaa ngwaahịa ndị dị oké ọnụ karịa yiri larịị ikpa na twill ikpa ngwaahịa, na-akpa akwa bụ ezigbo, mma na nke onwunwu. Plain ikpa, twill ikpa na satin bụ ụzọ atọ dị mkpa nke ịkpa akwa na akwa. Enweghị ọdịiche dị iche n'etiti ezi na ihe ọjọọ ebe a. Onye ọ bụla nwere àgwà nke ya. N'ime ha, satin bụ n'ezie ọmarịcha akwa ọcha.
Ka anyị kwuo maka ụtụ zuru ezu.
Satin satin ga-amata ọdịiche anọ: satin, satin strip, satin grid, satin jacquard.
Kedu ụdị akwa bụ satin? N'ezie, site n'okwu mmeghe ugbu a, ị ghọtalarị na "ịkpa akwa, ọgbụgba, na satin" niile bụ akwa, ọ bụghị akwa ndị a kapịrị ọnụ.
A na-eji akwa satin akwa akwa satin, nke a na-akpọ satin. Texturedị ahụ bụ ihe mgbatị dị larịị (lee foto). N'iji usoro nke ịcha akwa na mbụ ma na-agba ya, ụdị akwa a bụ agba siri ike. Enweghị ike imeli obi ụtọ ahụ, ọ naghị adị mfe.
E nwekwara ụdị satin, a na-akpọ satin grid, nke bụkwa agba siri ike ma bụrụ ụdị lattice (lee foto).
Satin strips na satin grid bụkarị ihe eji edozi akwa ụra. Ha adịghị ọnụ na okomoko ma bara uru. A na-ejikwa satin na satin grid na-emepụta ngwa ngwa ụlọ, mana ha anaghị ewu ewu karịa akwa satin jacquard.
Uwe Jacquard: Thekpụrụ dị na akwa a kpara, ọ bụghị akwụkwọ nkịtị, ma ọ bụ ihe mkpuchi. Mgbe akwa a na-akwa, akwa na akwa akwa na-agbanwe ka ọ bụrụ ụkpụrụ, eriri yarn ahụ dị mma, agịga agịga dị elu, ọ naghị arụ ọrụ, ọ dịghị ada oyi, ma nwee ezigbo nkasi obi. Jacquard bụ onye ama ama n'ahịa, akwa akwa satin na-adịkwa elu ma na-atọ ụtọ. Iji chọpụta ọdịiche dị na satin, tụnyere ọnụ yarn na njupụta.
Satin ahụ na-ekwukwa banyere yarn ahụ. Ka anyị kwuo gbasara ọnụ ọgụgụ ahụ, nke bụ ihe anyị na-ahụkarị 30, 40, 60, wdg. Dịka ọmụmaatụ, ụfọdụ ndị enyi kpọrọ ya 30S maka 30, ọ bụ otu, ọ nweghị ọdịiche! Ya mere, gịnị kpọmkwem bụ ọnụ ọgụgụ? Aghọtara m ya otu a:
Agụ bụ ọkọlọtọ nke yarn ọkpụrụkpụ. Dị ka ihe atụ, a pụrụ ime otu gram nke owu ka ọ nwee ike ịdị n’ime eri 30 n’ime mita 1, ya bụ yaad iri atọ, na otu gram nke owu nwere ike iji yarn 40 mee otu mita 1 n’ogologo, ya bụ eri 40; enwere ike ịme otu gram nke owu n’ime ogho 60. Otu yarn nwere ogologo nke 1 mita bụ yarn 60. N'ezie, ka ọnụọgụ ahụ dị elu, nke ka mma yarn ahụ ka mma. Na yarn yarn bụ ịkpa akwa, nke dị nro na nke dị nro karị ga-adị. Otú ọ dị, akwa ndị a na-agụ na-achọ ihe ndị dị elu (owu), ha nwekwara ihe ndị dị elu a chọrọ maka igwe na-agbagharị na akwa akwa akwa, ya mere ọnụ ahịa nke akwa a dịtụ elu. Akwa akwa yarn na-adịghị mma maka akwa n'ihi na ọ dị obere!
Mentkwụ mentgwọ: anyị na-anabatakarị T / T 30%
Mbukota: Na mpịakọta mbukota na akpa n'ime na plastic akpa n'èzí ma ọ bụ dị ka ndị ahịa 'arịrịọ.
LAB DIPS na-ewe ụbọchị 2-4; Gbanyụọ na-ewe ụbọchị 5-7. 10-15days maka ntinye mmepe.
Agba agba nkịtị: ụbọchị 10-15.
Printing imewe: 5-10 ụbọchị.
N'ihi na ngwa ngwa iji, nwere ike ịbụ ngwa ngwa, biko zipu email kpakorita.
Kedu ihe kpatara ịhọrọ anyị / FEIMEI?
Anyị na-azụta yarn, na-emepụta akwa mmanụ ma na-anwụ ma ọ bụ na-ebipụta site na anyị onwe anyị, nke na-eme ọnụahịa asọmpi na nnyefe ọsọ ọsọ.
Nke gara aga: N'ogbe egwuregwu Jacquard Fabric na Scrunch Butg Leggings enweghị nkebi Sexy Yoga Leggings
Osote: High Quality Waterproof 100% Thin Windbreaker Waterproof Windproof Jacket ugwu Suit Fabric
Breathable Omenala akwa
Naịlọn Spandex Fabric
Single Jacquard akwa